Ny fivarotana sôkôla tsara indrindra any New York | Vaovao momba ny dia
Sôkôla Roni Sue, anisan'ireo fivarotana sôkôla tsara indrindra any Manhattan
Ny mpizahatany rehetra tonga any New York, ankoatry ny fivarotana fitafiana, dia ho gaga ny fivarotana sôkôla. Raha liana amin'ny kakaô ianao (amin'ny endriny rehetra), amin'ity lahatsoratra ity dia hanolotra lisitra anao izahay miaraka amin'ireo fivarotana sôkôla tsara indrindra azonao jerena ao amin'ny Big Apple.
Sôkôla Kee's dia fivarotana miorina amin'ny 80 Thompson Street, fivarotana mivarotra sôkôla an-trano amin'ny fampiasana akora tsara indrindra. Nosokafan'i Kee Ling ny fivarotana tamin'ny 2002. Atao isan'andro ny sôkôla sy vatomamy ary hitanao koa ny fomba fahandro azy ireo.
Fivarotana sôkôla iray hafa mendrika hitsidika an'i New York dia Jacques torres, miorina amin'ny 350 Hudson St. Eto, dia mamorona sôkôla mpanao asa-tanana tena izy izy ireo. Anisan'ireo vokatra vokariny, miavaka ny bonbon sôkôla, ny cookies ary ny sôkôla mafana efa nahazo loka.
Maison du Chocolat fivarotana sôkôla iray hafa izay misongadina any New York. Ny fivoarany sy ny tsirony mahery vaika no miavaka amin'ireo vokatra ao amin'ity magazay ity. Ny pitsopitsony dia mitandrina tsara ao amin'ny magazay ary, anisan'ireo manampahaizany manokana, misongadina ny truffles sy ny sôkôla. Ho fanampin'izany, misy ihany koa ny karazana zava-mamy mihoatra ny 35 azo zahana.
Misongadina ihany koa any Manhattan Vosges Haut Chocolat. Fivarotana iray izay miavaka ny fomba fanamboarana sôkôla manavao, na amin'ny fifangaroan'ny akora na amin'ny fampisehoana. Anisan'ireo mampiavaka azy io, tokony hasongadintsika ny Voahangy Mainty, ny Rooster Truffle ary ny Afo Mena. Ho fanampin'izay dia tokony hasongadina koa ny mampiavaka azy manokana.
Ary farany, fitsidihana an'i Sôkôla an'i Roni Sue. Mahafinaritra tanteraka ny fomba fahitan'izy ireo ary, ankoatr'izay, manana lakozia misokatra izy ireo, ao no anamboarana fomba fahandro mahafinaritra toy ny sôkôlà akondro, sôkôla serizy na marzipan ary fifangaroan-tsetroka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny fivarotana sôkôla tsara indrindra any New York
Mozartkugeln, ny baolina sôkôla any Salzburg